Muxuu Zinedine Zidane ka yiri guushii ay kooxdiisa Real Madrid ka gaartay Atalanta? – Gool FM
(Madrid) 25 Feb 2021. Tababaraha Real Madrid ee Zinedine Zidane ayaa muujiyay sida uu ugu faraxsan yahay guushii ay kooxdiisa kaga gaartay Atalanta kulankii lugta hore wareega 16-ka ee UEFA Champions League.
Real Madrid ayaa guul dirqi ah ka soo heshay 10 xiddig oo Atalanta ah kulanka lugta hore wareega 16-ka ee Champions League, kaddib markii ay kaga soo adkaatay 0-1, xilli ciyaartan ay ka dhacday garoonka naadiga reer Talyaani ee Gewiss Stadium.
Haddaba Tababaraha Real Madrid ee Zinedine Zidane ayaa kulanka kaddib la hadlay warbaahinta wuxuuna yiri:
“Waxaan u maleynayaa inaan ku dhibtoonay kooxda naga soo horjeeday, laakiin waxaan ku guuleysanay inaan gaarno natiijo wanaagsan, waxaana soo bandhignay ciyaar fiican.”
“Waa inaan ciyaar weyn ciyaarnaa kulanka soo laabashada, waana ognahay inay tahay inaan guuleysano.”
“Ma jiraan wax naga dhinaa, Atalanta waa koox jir ahaan xoogan, xaqiiqdii waxay qabteen shaqo aad u fiican, laakiin waxa ugu muhiimsan waa natiijada.”
Labada koox ayaa mar kale ku kulmaya garoonka Alfredo Di Stefano ee ku yaala caasimada Spain ee Madrid, 16-ka bisha soo socota ee Maarso, Atalanta ayaa wali rajo ka qabta inay u soo baxdo wareega xiga ee tartankan, laakiin waa hadii ay natiijo ka wanaagsan tan hadda ay guuleystaan kulanka lugta labaad, taas oo ah hawl adag.